Maxay tahay in aad samayso hadduu kugu dhaco cudur lagu qaado galmada - BBC News Somali
Maxay tahay in aad samayso hadduu kugu dhaco cudur lagu qaado galmada
Dadka ay warbixintu ka hadlayso waxay da'dooda u dhaxaysaa 15-24 sano
Xanuunnada lagu kala qaado xiriirka gogosha ayaa aad ugu badan dhallinyarada, gudaha dalka Ingiriiska.
Sannadkii lasoo dhaafay ayaa la soo tabiyay 144,000 oo kiisaska cudurradaas ah, kuwaas oo ku dhacay dad ay da'dooda u dhaxeyso 15 ilaa 24 sano, sida ay shaacisay waaxda caafimaadka dadweynaha ee waddanka Ingiriiska.
Tiradaas ayaa qiyaas ahaan u dhiganta in maalin walba ay xanuunnadaas qaadaan 400 oo ruux, ama afartii daqiiqaba uu hal qof qaado.
Noah, oo ay da'diisu tahay 19 jir ayaa BBC-da u sheegay in uusan "rumeysanin" marka uu ku dhacay mid ka mid ah cudurradaas la is qaadsiiyo, wuxuuna intaas ku daray inuu u maleynayay wax dad kale oo aan isaga ahayn ku dhacay.
"Waligey wax noocaas ah ima soo marin, ma aanan hubin waxa uu ahaa xanuunkaas. Xitaa ma rabin inaan aamino" ayuu yiri.
Seynisyahano jarmal ah oo ka digay xanuunada ka dhasha cayilka faraha badan
Muxuu samaynayaa qofka uu ku dhaco xanuun galmada lagu kala qaado?
Dr Peter Greenhouse, oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada lagu kala qaado galmada, ayaa sheegay in qof walba oo wax khaldan iska dareema ay khasab ku tahay inuu "baaritaan caafimaad sameeyo sida ugu dhakhsiyaha badan uguna macquulsan".
Dadka qaar ee guryaha ku haysta qalabka baaritaanka, ayuu kula taliyay iney xarumaha caafimaadka tagaan marka ay ogaadaan iney cudurradaas qabaan.
Miyey kugu adkaan doontaa inaad dhakhtarka la hadashid?
Waa iska caadi in dadku ay ceeb dareemaan marka ay isku arkaan xanuunnada noocaas ah, laakiin ma jirto sabab loo walwalo.
"Dhammaan dadka ka shaqeeya qeybta arrimaha la xiriira galmada ee xarumaha caafimaadka, waa kuwo loo soo xushay iney howlahaas si wanaagsan oo dhimrin leh ula tacaalaan qof walba oo ka cabanaya xanuunnada noocaas ah" ayuu yiri Dr Greenhouse.
Dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in ay dhallinyarada iska ilaaliyaan galmada
Waa maxay tallaabooyinka xiga?
Dr Greenhouse ayaa sheegay in tallaabada xigta ay tahay sidii loola xiriiri lahaa qofka lamaahana la ah qofka xanuunka qaaday(xaaska ama seyga), si loogu wargaliyo xaaladda jirta, baaritaanna loogu sameeyo.
Waxay noqon kartaa arrin laga xishoodo, laakiin aad bay muhiim u tahay in la war galiyo dadkii ay qofka xanuunsan horay u wada dhaqmeen, si iyagana loo daweeyo, loogana hor tago iney cudurka sii faafiyaan.
Inta badan xanuunka STI ayaa loo daweeyaa si sahlan, lamana oggola in xiriir galmo uu qofkaasi sameeyo ilaa inta uu dawada ka dhammeysanayo.
Haddii xanuunnada noocan ah aad qabtay muddo aad u dheer, la xiriir dhakhtarkaaga, si uu kuu siiyo talooyinka ugu haboon ee ku saabsan habka loola tacaali karo.
Waa maxay habka ugu haboon ee aad ku wargalin karto qofkii aad horay xiriirka galmo u wadaagi jirteen?
Ugu horreyn, ha khalkhalin.
Xasuusnow, si kasta oo aad ciriiri u dareemeysid, dhakhtarkaaga ayaa diyaar u ah inuu ku caawiyo.
Waad u sheegi kartaa dadki uu horay xiriirka qoysnimo idiinkaga dhexeeyay arrinta, xitaa dadka qaarkood waxay door bidaan iney si fool-ka-fool ah ugu sheegaan, dhakhtarkuna wuxuu ku siin karaa talo ku aaddan sida ugu wanaagsan ee aad u wajihi kartid habka sheegitaanka.
Laakiin haddii aadan jecleyn inaad sidaas sameyso, dhakhaatiirta qaarkood ayaa kuu wacaya taleefannada dadkaas.
Shaqaale kale oo caafimaadna waxayba hayaan qaab aad u fiican oo farriin qoraaleed loogu diri karo qof kasta oo aad horay gogol u wadaagteen, iyagoo u sheegaya macluumaadka iyo habka ugu fudud ee baaritaanka loogu sameyn karo, si loo ogaado iney qabaan cudurrada la is qaadsiiyo.
Waa sidoo kale jira qalab laga helo internet-ka oo isla sidaasoo kale lagu sameyn karo.
Waxa ugu muhiimsan waa in loo sheego iney heli karaan baaritaanka, isla markaana la joojiyo iney cudurrada ku sii fidaan bulshada.
TOOS Kuuriyada Waqooyi oo Covid ku dayaysa biyo-kulul iyo cusbo